Uyisebenzisa kanjani i-PHP ukubuyisa umhla kwifomathi yeJSON
NguSteve Suehring, uJanet Valade
Le misebenzi,json_encode ()kwayejson_decode (), yenza kube lula ukusebenza neJSON kunye nokwenza iinkonzo zewebhu zeJSON kwi-PHP.
Indlela elula yokwenza iinyawo zakho zimanzi ngeenkonzo zewebhu kukubuyisa umhla kwifomathi yeJSON. Nantsi indlela onokuyenza ngayo:
Vula umhleli wakho wokubhaliweyo okanye inkqubo ye-IDE kwaye wenze ifayile entsha engenanto.
Beka le khowudi ilandelayo kwifayile:
Gcina le fayile njenge-date.php kwingcambu yomncedisi wewebhu.
ide kangakanani i-thc emchameni
Jonga iphepha kwisikhangeli sakho sewebhu ku-http: // yobulali / umhla.php.
Kuya kufuneka ubone iphepha elinje liboniswe apha (nangona umhla uya kwahluka).
amanqanaba aphezulu eprotini egazini
uyisebenzisa njani i-jack jack
Inani elixutyiweyo libe liqhezu elingafanelekanga
ungayithatha i-magnesium kunye ne-anti-depressants
rp h10 / 325